Waamicha Oromummaa – Humna POOLISII OROMIYAAF! – Kichuu
[ January 25, 2022 ] OMN Ati eenyu? Turtii Gaazexeessaa Dajanee Tasammaa wajjin	TV
[ January 25, 2022 ] Aid trucks stranded outside Tigray amid reports of clashes	World
[ January 25, 2022 ] WHO chief makes case for 2nd term as Ethiopia criticizes him	Health
[ January 25, 2022 ] Dr Tedros WHO secret vote today-Turkish TB-2 drone Dedebit town attack 6 demands by Oromo	TV
[ January 25, 2022 ] Ethiopia’s chaotic situation:	Business
[ January 25, 2022 ] The Story of two East African countries: Employing Technology for contradicting purposes	Africa
[ January 25, 2022 ] ODDUU AMEE Icitii Hamzaa Boranaa Basee Shiraa Hogantotaa Oromo Irati	TV
[ January 25, 2022 ] Ethiopia’s peace vital for common infrastructure development: Kenya	Africa
[ January 25, 2022 ] Evidence from civilian bombing in Ethiopia points to Turkish drone	World
HomeAfaan OromooNewsWaamicha Oromummaa – Humna POOLISII OROMIYAAF!
Waamicha Oromummaa – Humna POOLISII OROMIYAAF!
Waamicha Oromummaa – Humna POOLISII OROMIYAAF! (Share godhaa miseensota hunda biraan gahaa)
Waggaa sadan tokko dura wayta qabsoon Oromoo finiintee diinaan kokkee wal qabaa turre san jaarmayaalee mootummaa keessaa qaamni dursee qabsoo Oromoof dirmate Poolisii Oromiyaa tahuu seenaan galmeessee jira. Gariin keessan saba keenyatti hin dhukaafnu jettanii aarsaa taatan. Gariin ni hidhamtan. Gariinis hojiirraa ariyamtan. Gariin sirnicha dhiiftanii ifatti qabsoo ummataatti dabalamtan. Aarsaa keessan boonsaan kun hundumtuu galmee seenaa keessatti cululuqee ifaa jiraata.
Seenaan Polisii Oromiyaa kun har’a hoo eessaa garamitti deemaa jira jedhaa of gaafadhaa. Har’a eega injifannoon Oromoo micciiramee harka Oromoo keessaa bahee as kaayyoon Poolisiin Oromiyaa leenjifamaa jiruuf Oromoo ittisuuf osoo hin taane ajjeesuuf, Oromummaa kunuunsuuf osoo hin taane diiguuf, Oromiyaa tiksuuf osoo hin taane salphisuu kan akeekkate tahuu haasawa warra gubbaa keessan jiruu irraa hubachaa jirra. Dhugaa dha, kaleessas bara Wayyaanee warri gubbaa keessan ture warra dhiiga Oromoo dhugee hin quufne ture. Isin garuu ergamtuu jaraa tahuu mannaa biddeenaa fi lubbuu keessanirratti murteessitanii gama sabaa gortan. Kan mataa keessan gubbaa jiru diinas haa tahuu fira, kaleessas haa tahu har’a, ejjennoo mataa keessanii hin jijjiirsifne, hin jijjiirsisus jennee abdanna.
Har’aa fi waggaa lama dura wanni adda godhu yoo jiraate waan tokko qofa. Waggaa lama dura diinni Oromoo guddichi Wayyaanee saba keenya waliin firooma tokkoyyuu hin qabne ture. Har’a ammoo qaamuma maqaa Oromoo himatu, gochaadhaan garuu olaantummaa sirna Nafxanyaa Oromoo irratti diriirsaa jiruu dha. ODPiin diigamee Bilxiginnaan dhalachuudhaan sirni Nafxanyummaa Oromoo irratti akka saaru murtaahe. Diina fagoo dhufee fi diina nu keessaa biqile kan adda baasu iddoo dhufiinsa isaa yoo tahe malee gochaan jaraa tokkuma. Inumaa isa ammaa kana wanni irra-hamaa godhus ni jira. Kaayyoo Nafxanyaa fannifatee Oromoon wal fakkaatee ummata qoqqoodaa jira. Oromoon akka lamatti miidhamaa jira. Warri halagaa ”taranyaa” ittiin jedhanii maqaa baasu. Warri maqaa Oromootiin masaraa seene ammoo sirna Nafxanyaa boollaa baasee lubbuu itti horuudhaan ”taranyaan” isaan akka tahu murteesseef. Har’a Itoophiyaa keessatti sagalee Oromooti moo kan warra Amaaraatu ”taranyaa” fakkaata gaaffii jedhu isinumaafin dhiisa.
Poolisoota Oromiyaa ! injifannoon qabsoo Oromootiin waggaa lama dura argame harka keenyaa bahee jira. Oromoon ifatti haa bahu malee abbaan fedhe aangoo yoo qabate rakkoo hin qabnu jennee imaanaa gootota kumootaa dabarsinee OPDOtti kennine. Kana gochuun keenya akka dhaabotaa fi aktivistoota qabsoo irra turanitti bolola aangoo kan hin qabne tahuu keenya garsiisa ture. OPDO waggaa 27 guutuu diinaaf ergamtee Oromoo ficcisiisaa turtes yoo taate of bartee sabatti deebinaan araaramuuf garaan keenya akka ummataatti bal’aa ture. Kaayyoon qabsoo gooneef ofii aangoo qabachuuf osoo hin taane Oromoo ifatti baasuu qofa akka tahe ragaan kana caalu hin jiru. Fayyaalummaan keenya sun garuu gatii nu kafalchiise. injifannoo dhiiga gootota kumaan arganne harka keenya keessaa baasee alagaaf kenne.
Gaafa Abiy Haamad masaraa seenee qabee Oromoon waan qabsaayeef argachuu dhiisii kan duraan argatee tureyyuu dhabaa jira. Kaleessa yoo xiqqaate Oromummaan isaa kabajamaa ture. Har’a sabummaa fi tokkummaan Oromoo eeboo Bilxiginnaatiin waraanamee dhiigfamaa jira. Warra waggaa dhibbaa ol nu bitaa baheen ammas salphifamaa jira. Itoophiyummaa Oromoon karaa gaafii isaa deebisuun fudhatu osoo hin taane Itoophiyummaa Nafxanyootaa kaleessaatu humnaan mataa Oromoo irratti fe’amaa jira. Gandummaan akka jabaatee Oromummaa diiguu fi kanaanis aadaan waliif birmannaa Oromoo akka laafu karoorri baafamee hojjetamaa jira. Gaaffii ummata Oromoo keessaa wanti deebi’e hin jiru. Hoggana amma jiru kana jalatti deebi’uufis hin deemu. Kan biraa hafnaan hogganooti OPDO kan kaleessa fuulduratti bahanii ”Kana booda goftaan keenya ummata Oromooti, gooftaa biraa hin qabnu” jedhan sun eessa akka gahan gafadhaa. Waadaan san akkam gootan jedhaanii.
Yaa Poolisoota Oromiyaa!
Ummanni Oromoo injifannoo isaa saamamee abadan manatti ol deebi’ee taa’uuf hin jiru. Qabsoo waggaa lama duraatti deebi’uun shakkii hin qabu. Kana jaalannee qofa osoo hin taane dhiiga gootota kumootaatu nu dirqa. Ekeraa isaaniitu irriba nu dhorka. Lafee isaaniitu nu waraana. Oromoon bara har’a akkasitti dammaqee fi teknooloojiinis tole dhiisii, bara hin dammaqne jedhamuu fi dukkana keessa ture sanuu roorrootti harka kennatee bulee hin beeku. Isinis as keessatti qooda Oromummaa keessanii bahuun seenaa gaarii qabdan tikfachuu malee karaan biraa ulfina isinitti horu hin jiru. Saba keessan waliin dhaabadhaa! Qawween baattan kun kan Oromoo ajjeesu osoo hin taane kan Oromoo irraa diina ajjeesu tahuu qaba. Kaleessa Wayyaaneen akkasitti salphaatti kufti jedhee kan yaade hin turre. Humni qabsoo ummataa garuu waan godhe agartaniittu. Warra har’a injifannoo Oromoo micciiree halagaaf kenne kanas kan hudha qabee afaaniinis tahu ”Gooftaan keenya Oromoo dha” jechisiise qabsoodhuma sabichaa ti. Borus sabni kun dhiiga dabalata dhangalaasa taha malee ifatti bahuun isaa hin oolu. Gaafa sana garuu warri har’a maqaa sabichaatiin kakatee aangoo qabatee ka’ee deebisee gane gaafatama seenaa jalaa hin bahan.
Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. Oromoo ajjees jedhanii isin bobbaasuu danda’u. Saba keessan tiksaa malee hin ajjeesinaa. Saba keessanitti aggaammattanii maqaas mataas hin dhabinaa. Maqaa keessan tarree goototaatti malee tarree Agaaziitti hin galmeessinaa. Ilmaan keessan boruuf maqaa badduu dhalchiftanii hin darbinaa. Musxafaa Huseen faa fakkeenya godhadhaa. Warra isin keessa dhaabatee sabatti garaa jabaatu agarraan bira hin dabrinaa, adabaa. Caasaa jirtan keessatti tokkummaa keessan jabeessaa. Kan isin fakkaatee isin basaasu of keessaa balleessaa. Siyaasaa biyyi keessan, keessattuu Oromoon itti deemaa jiru dammaqinsaan hordofaa. Kiyya hoo qoodni maali jedhaa ejjennoo sabni isinirraa eegu fudhadhaa. Guyyaan deebi’ee dheeratus Oromoon bilisummaa dhugaa argachuun abadan waanuma hin oolle!
Yaya Beshir i
Godina Booranatti Polisiin Oromiyaa fi Makkalakaayaan Dhukaasa Walirratti Banuun Dhagahame.
OMN: Cufamuu SOODAREE (Dokumantarii – Sirnakkoo Goolamte)
Oromummaan Hin badu, hincoolligullee Barabaraan jiraata. warra Oromummaa balleeysuu fedhu EPP/Bilxiginnaatu daaraa botoroo ta’ee barbadaawee bada.
Bilxiginnaa: Humnaa Addaa Nannoo Oromiya fi Rayan Itisa Biyyaa walti Bu,udhan Ififis wall fixani Umatale Fixan
WATCH: How Bill Gates Monopolized Global Health!
OMN Ati eenyu? Turtii Gaazexeessaa Dajanee Tasammaa wajjin
Dr Tedros WHO secret vote today-Turkish TB-2 drone Dedebit town attack 6 demands by Oromo
Ethiopia’s chaotic situation:
The Story of two East African countries: Employing Technology for contradicting purposes
ODDUU AMEE Icitii Hamzaa Boranaa Basee Shiraa Hogantotaa Oromo Irati